Global Voices teny Malagasy » Zavona sy Haiyan: Ireo Loza Nahafaty Tao Azia Atsimo Atsinanana Tamin’ny 2013 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Janoary 2014 13:39 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Indonezia, Malezia, Singapaoro, Thailandy, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Tontolo_iainana, Voina
Ho tsarovana toy ny taonan'ireo loza mamatsiravina tao Azia Atsimo ny 2013. Fandrarahana solitany an-dranomasina , fiparitahan'ny  bemangovitra, ireo horohorontany, ny fahasimban'ireo harandriakan’  akoran-dranomasina, lozam-pifamoivoizan'ny fiara fitaterana, tafio-drivotra arahin-kavandra , sy ireo tondradrano marobe nandrava ireo tanàna maro tao amin'ny faritra. Saingy ireo loza roa lehibe indrindra nandritra ity taona ity dia ilay halotoan'ny zavona izay nandrakotra ny lanitr'i Singapore, Malezia, ary Indonezia; sy ilay rivodoza mahery vaika Haiyan (Yolanda) izay nikapoka ny faritra afovoan'i Filipina.
Niteraka ny fidinan'ny soson-javona matevina tao Singapore sy ireo faritra maro tany Malezia ireo doro ala tany Sumatra, Indonezia ny Jona lasa teo. Raha marina fa olana mitranga matetika  any amin'io faritra io aza ny doro ala, dia mbola ratsy noho ireo tamin'ny taona maro lasa ny zavona nihoatra ny sisintany tamin'ity taona ity. Lehibe izany, mainty, matevina, ary sarotra diovina. Niteraka ny fiakaran'ny fahalotoan'ny rivotra ho amin'ny tahany avo indrindra hatrizay tany Singapore sy Malezia izany.
Novolavolaina  ireo rindrambaiko sy vohikala maro tanaty aterineto mba hanampiana ireo olom-pirenena hanara-maso ny toerana misy ilay zavona, sy hanarahana ireo toerana ahitàna aron-tava azo antoka, toeram-pitsaboana, ary fialofana.
Araka ny nampoizina, nifantoka tamin'ny fiantraikan'ilay zavona tany Singapore sy ireo faritra an-tanàn-dehibe ao Malezia ireo tatitry ny media. Indrisy, vitsy ireo tatitra mikasika ny mahazo ireo olom-pirenena Indoneziana izay nijaly mafy noho ny fiantraikan'ny zavona sy ireo doro ala. Riau , any andrefan'i Indonezia, dia raisina ho ‘loharano’ niaingan'ilay zavona.
Taorian'ny nitonian’ ny zavona tao amin'ny faritra, nisy andianà loza voajanahary namely an'i Filipina. Nandrava tranobe maro tany amin'ireo faritanin'i Bohol sy Cebu any Filipina ny horohorontany goavana  iray tamin'ny Oktobra. Herinandro vitsy taorian'izay, nisy rivodoza mahery vaika nitondra fahasimbàna tany amin'ireo faritan'i Samar sy Leyte teo amin'ny manodidina.
Haiyan  no tafiotra mahery indrindra  eran-tany tamin'ity taona ity. Io ihany koa no faha-efatra mahery indrindra ka niantefa tamin'ny tany tanatin'ny tantaran'izao tontolo izao. Anatin'ny faritra manodidina ny rivodoza mahery vaika ao Azia Pasifika, tafiotra ampolony mahery isan-taona no mamely an'i Filipina. Saingy hafa i Haiyan. Noporofoiny fa rivodoza tena mahery vaika izany rehefa niteraka onjam-tafiotra  tahaka ny “tsunami” izay namono tsy tra-drano olona an'arivony maro. Amin'izao fotoana anoratana izao, maherin'ny 6.000 no maty saingy mety mbola ho avo izany taha-pahafatesana izany satria mbola manohy manadio ireo faharavana any anatin'ireo vohitra maro ireo mpanao asa famonjena.
Olona maro sisampaty no nitaraina  fa tsy nomena araka ny tokony ho izy sy haingana ho an'ireo vondrom-piarahamonina ny fanampiana. Razana maro no mbola hita mitsitra eny an-dàlambe, ireo tsy manan-kialofana mangataka sakafo, ary tsy mbola tonga tany amin'ireo nosy misintak'ireo faritany ravan'ilay rivodoza mahery vaika ireo ezaka famonjena  herinandro taorian'ny nitrangan'ilay loza.
Taorian'ny famerenana amin'ny ampahany ireo onjam-pifandraisana tany amin'ireo faritra sasany, afaka niditra aterineto ireo olona vitsivitsy tsy maty fo aman'aina sy ireo mpanao asa famonjena ary afaka nitantara  ny fijalian'izy ireo nandritra ilay tafiotra; ary koa momba ny fomba niatrehan'izy ireo ireo andro maro tsy nisy herinaratra, sakafo, sy fialofana. Namaky fo sy mahery ireo tantaranà  fahaverezana sy fitolomana ho velona.
Taorian'ilay loza mahatsiravina, nanindry  ny hanaovana fifanarahana mahomby kokoa momba ny fiovaovan'ny toetrandro ireo mafàna fo mikasika ny tontolo iainana mba hisorohana ny fahasimbana goavana any amin'ireo firenana itambaranà nosy kely tahaka an'i Filipina.
Mandritra izany fotoana izany, naka ohatra tamin'ilay fibosasaky ny fanampiana  sy ny fitseran'izao tontolo izao ireo niharan'ilay rivodoza mahery vaika ireo teratany ao Filipina.
Koa satria nanakaiky ny faran'ny taona 2013, dia nilaina ny nampahatsiahy ireo anatra mankarary avy amin'ny tranga niseho tao Azia Atsimo Atsinanana tamin'ilay zavona sy Haiyan. Mbola hiverina indray io zavona io amin'ny 2014 raha tsy misy ezaka atao isaky ny faritra hisorohana ireo doro ala ao Sumatra. Raha ny mahakasika an'i Filipina, tsy maintsy tohizana amin-kery ny fanarenana  ireo faritany nokapohan'ilay rivodoza mahery vaika raha tsy izany dia vao mainka hampaharitra ny fijalian'ireo niharan'izany rivodoza izany ny krizy mandrahona ny fiainan'ny olona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/08/56198/
 Fandrarahana solitany an-dranomasina: https://globalvoicesonline.org/2013/08/10/photos-oil-spill-in-thailands-samet-island/
 olana mitranga matetika: https://globalvoicesonline.org/2010/10/22/haze-envelops-singapore/
 fiakaran'ny : https://globalvoicesonline.org/2013/06/24/haze-chokes-singapore-and-malaysia/
 horohorontany goavana: https://globalvoicesonline.org/2013/10/18/photos-hundreds-dead-historic-churches-destroyed-in-philippine-quake/
 tafiotra mahery indrindra: https://globalvoicesonline.org/2013/11/11/photos-typhoon-ravaged-villages-in-the-philippines/
 ezaka famonjena: https://globalvoicesonline.org/2013/11/12/photos-philippine-typhoon-survivors-desperate-for-aid/
 fiovaovan'ny toetrandro : https://globalvoicesonline.org/2013/11/23/after-haiyan-disaster-philippines-calls-for-relief-and-justice-for-climate-change-victims/